गाडिहरु Featuring एक रोमाञ्चक सिनेमा हेर्दै भन्दा रेल यात्रा थप लिन तपाईं के प्रेरणा हुनेछ? सबै भन्दा राम्रो सिनेमा गाडिहरु Featuring हाम्रो सूची मा एक नजर, र हामीलाई tweet @saveatrain र जो मान्छे तपाईंले देख्नुभएको छ हामीलाई भन्नुहोस् र तपाईंले धेरै तिनीहरूलाई प्रेम यदि हामी जस्तै.
चलचित्रहरू सबै भर, को Hogwarts एक्सप्रेस रेल प्रत्येक स्कूल वर्ष को शुरुवात र अन्त्य प्रतीक जारी र केही राम्रो शानदार कहानी-रेखा लागि क्यानभास प्रदान. विशेष गरी समय हैरी र रन रेल छुटेका र फ्लाई स्कूल एक ENCHANTED कार थियो!
एक venomous सर्प पनि छ, अन्त्येष्टि, एक मनन र ... राम्रो, हामी दिन छैन कुनै पनि थप टाढा. यो पंथ क्लासिक तपाईं आफ्नो अर्डर गर्न प्रेरित गर्न दिनुहोस् रेल साहसिक.
अलग परिचय र केही flashbacks देखि, सम्पूर्ण कहानी एक सेट छ लक्जरी रेल. Poirot बोर्डहरू को पूर्वी एक्सप्रेस लामो योग्य छुट्टी लिन. प्रथम श्रेणी लक्जरी बार मा र भोजन कार, ऊ अप्रत्याशित यात्रुहरूको समूह भेट्छ. तिनीहरूलाई को एक आफ्नो जीवन खतरामा छ र Poirot रंगरुट खोज्छ दाबी – एक सम्मानित गुप्तचर – उहाँलाई सुरक्षित राख्न.
सुन्दर भन्नुभयो मा, नाटकीय रहस्य thriller, कथा Poirot प्रत्येक यात्री साक्षात्कार रूपमा प्रकट र तिनीहरूलाई प्रत्येक एक गोप्य छ बाहिर पाता र यो देखिन्छ रूपमा सबै छ.
चलचित्र को साना इन्जिन निम्नानुसार – एक खेलौना रेल – DREAMLAND उनको साहसिक भर, त्यो अन्य रेल वर्ण र खिलौने संग पारस्परिक रूपमा. त्यहाँ वास्तविक संसारमा समानान्तर कहानी छ, जहाँ protagonist रिचर्ड भनिने सानो केटा छ. तथापि, जब रिचर्ड DREAMLAND भित्र पुग्छन् यी दुई दुनिया ठोक्किनु. आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ समस्या गराउँछ, so he needs to go back. Adventure and hijinks ensue while he and the toys try to get him back into the real world.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-movies-featuring-trains%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)